Shirkada SD Bioline oo Ka fulisay Puntland Tababarkeedii ugu horeyay(Sawiro) – SBC
Shirkada SD Bioline oo Ka fulisay Puntland Tababarkeedii ugu horeyay(Sawiro)
Posted by editor on May 21, 2011 Comments
Waxaa maalin ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada garoowe Tababar soconayey laba maalmood. Tababkan oo ay ka faa,iideysanayeen 17qof oo isugu jira kalkaaliyayaal caafimaad oo matalayey gobolada kala duwan ee puntland Tababarkan ayaa lagu baranayey habka baadhista sheybaarka casriga sida loo qaado gaar ahaan cudurada baadhitaanka Cudurada HIV AIDS, Syphilis, HBV, HCV (fayruska Beeka Ku dhaca ).
Hirgalinta tababarkan ayaa waxaa horsed ka ahaa Shirkad Kuuriyaan ahoo lagu magacaabo SD Bioline oo soo saarta qalabka Qalabka sheybaarka casriga shirkadan waxey dhawaan ku guuleysatey in shahaado caafimaad ay ka hesho hey,ada caafimaadka aduunka ee WHO (world Health Organization).
Madaxa shirkada Dr.Said Mohamed Jama ayaa xidhitaankii tababarkan hadal kooban oo uu ka jeediyey waxa uu sheegey in qorshahan uu yahey bilow hase yeeshee la balaadhin doono qorshan maadaama uu yahey mid si weyn wax uga tari kara baahida caafimaad ee ka jirta puntland.
Maxamed C/qaadir barre oo madax ka ah heyada Wacyi galinta Aydhiska puntland ayaa ku booriyey bahdii wax ka baraneysey in wax ay bartaan ay uga faa,iideeyeen bulshadooda isagoo si gaarana u amaaney qalabka iyo sida tababarkani uu u dhacey.
Mid ka mida ka faa,iideystayaashi barnaamijkan oo SBC wareysi gaara siiyey ayaa sheegey in jirtey baahi badan oo loo qabey aqoontan inkastoo haatan ay ka faa,iideysteena waxa uu tilmaamey in baadida ka jirta puntland aqoontan oo kale ay muhiin u tahey habsami u socodka hawlaha caafimaadka.Waa markii ugu horeysey ee shirkada SD Bioline ay fuliso tabbabar noocan oo kale ah.
C/naasir yaasiin gawowe.